Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Fitsipika COVID vaovao ho an'ny Italia manomboka ny alatsinainy 26 aprily
Ahoana no ifandraisan'ny teny avy amin'ny Papa Fransoa tamin'ny fetin'ny tany omaly tamin'ny lalàna vaovao napetrak'i Italia ho didim-panjakana navoakan'ny governemanta italianina mba hisorohana ny fitandremana ny fitondran-tena sy ny fahalalahana mifehy ny lokon'ny faritra?
Hoy ny Papa: Mila manasitrana ireo fifandraisana simba ireo isika, izay tena ilaina hamelomana ny tenantsika sy ny vatan'ny fiainana manontolo.
Ny didim-panjakana PM Draghi vaovao dia mamolavola fanekena, fameperana, fandrarana ary lalàna momba ny fivezivezena any ivelany sy ao anatin'ny faritra isam-paritra misy loko.
Misy fihetsiketsehana isan'andro isan'andro eo amin'ny kianja italianina manoloana ny tranoben'ny governemanta any Roma.
Ny hafatry ny Papa Francis tamin'ny fotoanan'ny Andron'ny Tany dia hoe: «Nopotehinay ny fatorana nampitambatra anay tamin'ny Mpamorona, ny olombelona hafa ary ny sisa amin'ny zavaboary. Nanoratra izany i Papa Francis tao amin'ny Twitter izay nanipika fa "mila manasitrana ireo fifandraisana simba ireo isika, izay tena ilaina hamelomana ny tenantsika sy ny vatan'ny fiainana manontolo."
Ny tetiandro fanokafana ny praiminisitra vaovao an'ny Italia Ny didin'i Mario Draghi nanomboka ny 26 aprily hatramin'ny 31 jolay dia namorona fanekena, fameperana, fandrarana ary lalàna momba ny fivezivezena any ivelany sy ao anatin'ny faritry ny faritra misy ny loko. Ny fitsipika COVID vaovao ho an'ny Italia dia mametra ihany koa ny isan'ny olona afaka mampiasa ireo trano ireo ary amin'ny toe-piainana manao ahoana ary ankoatry ny fitsipika mbola manery ny sazy famokarana.
Mikasika ireo hetsika hafa toy ny fanatanjahan-tena, sinema, teatra, foara, sns, ireo dia manana sy tsy manana toko lehibe ao amin'ilay didim-panjakana. Toy ny labyrint iray izay sarotra ny mamindra azy, hany ka ny ampahany betsaka amin'ny mponina ankehitriny dia reraka, osa, na tsy te hankatò intsony ireo didim-panjakana, dia mampipoitra fisalasalana ny amin'ny fahazoana azy fototra.